दुखद Archives - SAMACHAR SANJAL
बस र टेम्पो ठोक्किदा एकको मृत्यु
March 10, 2018 admin>
बनियानी । झापाको चारपानेस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा आज बस र टेम्पो ठोक्किइ दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा दमक नगरपालिका–१५ का ४० वर्षीय कमलकुमार मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । काँकरभिट्टाबाट विराटनगरतर्फ जाँदै गरेको मे १ ख २६८६ नं।को सगरमाथा यातायात बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मे १ ह २७१० नं।को टेम्पोलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटना हुँदा टेम्पो चालक दमक–१५ का ५१ वर्षीय चन्द्रबहादुर।मगर, टेम्पोमा सवार दमक–१० कमलकुमार मगर घाइते भएका थिए । बिर्तामोड स्थित…
श्रीमान् विदेश गएको मौकामा प्रेमीसँग यौन प्यास मेटाउन खोज्दा
महिला पुरुषवीच हुने शारीरिक सम्पर्कलाई विवाहले वैधानिकता दिएको छ। तर, त्यस्तो सम्पर्क अरुसँग राख्दा पाँचथरकी एक युवतीले ज्यानै गुमाउनुपरेको छ, जसमा वैदेशिक रोजगारी पनि प्रमुख कारण देखिएको छ। ६ महिनाअघि विवाह गरेका श्रीमान् साउदी अरब गएपछि परपुरुषसँग शारीरिक सम्पर्क राखेकी पाचथरको अमरपुर–९ की शान्ता तामाङको ५ महिनाको गर्भावस्थामा मृत्यु भएको हो। वाह गर्नुअघि मोरङ बेलबारी–५ का पशुपति तामाङसँग प्रेम सम्बन्ध राख्दै आएकी शान्ताको अन्ततः उनै पशुपतिसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट बसेको ५ महिनाको गर्भका कारण शनिवार मृत्यु भएको हो। बिर्तामोडस्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा मृत्यु भएपछि शान्तालाई ‘दमले मृत्यु भएकी बहिनी’ भन्दै पशुपतिले…
महिला दिवसकै दिन बाेक्सीको आरोपमा किशोरीमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट
धनगढी, फागनु २४ । महिला दिवसकै दिन बाेक्सीको आरोपमा किशोरीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिएको छ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ की १८ वर्षीया किशोरी राधा चौधरीलाई स्थानीय गुरुवा रामवहादुर चौधरीले बाे‍क्सीको आरोपमा कुटपिट गरेका हुन् । आफ्नो पुजाआजाका लागि नआएको निहुँमा बाेक्सी भनेर कुटपिट गरिएको स्थानीय वासिन्दाले बताएका छन् । ६ घण्टासम्म कुटपिट हुँदा चौधरी बेहोस भएपछि उनको घोडाघोडी अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । आज साँझ सम्म पनि उनको होस खुलेको छैन । गुरुवा रामप्रसाद चौधरीलाई भने प्रहरीले उपचार खर्च दिने सर्तमा छोडेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडसँगै घोडाघोडी…
घरमा कोही नभएको बेला दिदीबहिनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला !देखे पनि नदेखे झै नगर्नुस Rip Rip Rip मृत आत्माले शान्ति पाओस !
जनकपुर। जनकपुरमा दुई दिदीबहिनी झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका छन् ।जनकपुर उपमहानगरपालिका १४ रजौल बस्ने नरेन्द्र चौधरीकी छोरीहरु १६ वर्षीया अञ्जली चौधरी र १४ वर्षीया चाँदनी चौधरीको झुण्डेर ज्यान गएको परिवारले जनाएको छ ।धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रविन धितालका अनुसार बुधबार दिउँसो २ बजे घरमा कोही नभएको मौकाछोपी दुवै दिदीबहिनी छुट्टाछुट्टै कोठामा झुण्डेको अवस्थामा अचेत अवस्थामा फेला परेपछि घरपरिवारसहित स्थानीयले तत्कालै पचारको लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको घरपरिवारले जानकारी गराएका छन् । घटना हत्या हो वा आत्महत्या त्यसको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक धितालले जानकारी दिनुभयो । दुवै दिदीबहिनीको शवलाई…
सामूहिक बलात्कारपीडित बालिका अस्पतालमा, सहयोगको अपेक्षा हेर्नुहोस् भिडियो
ट्याक्टरको ठक्करबाट नवलपरासीमा १ को मृत्यु, एक गम्भिर घाईते – rip rip
नवलपरासी । दुर्घटनाका दुखद खबरहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । नवलपरासीको गैंडाकोट–८, जयश्रीमा ट्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटीमा सवार एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटले दिएको जानकारी अनुसार गएराति पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना २३ प १२७८ नम्बरको स्कुटीलाई ना ५ त ६८०२ नम्बरको ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा स्कुटीमा सवार भरतपुर महानगरपालिका–२३ निवासी ३० वर्षीय युवराज अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइतेको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । http://www.monsoonmedianepal .com/2018/03/1922/
दुखद समाचार, सवारी दुर्घटनामा २५ जनाको मृत्यु कृपया Rip लेखना नभुल्नु होला मृतक आत्माले सान्ति पाओस
नयाँ दिल्ली भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातमा विवाहको भोजमा जान लागेका व्यक्तिहरु बोकेको एक ट्रक मङ्गलबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त हुदा कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गएको समाचार छ । विवाह भोजमा सहभागी हुन लागेका व्यक्तिलाई लिएर गुडिरहेको ट्रक सडकबाट गहिरो खोँचमा खस्दा कम्तीमा पनि २५ व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । गुजरातको एक स्थानीय टेलिभिजन च्यानल न्युज–१८ ले उक्त जानकारी दिएको छ । गुजरात राज्यको भावनानगर क्षेत्रमा उक्त दुर्घटना भएको थियो । एकजना स्थानीय नागरिकको विवाहको भोजका लागि सहभागीहरु बोकेर सो ट्रक एक स्थानीय होटलतर्फ गइरहेको बताइएको छ । यस घटनामा…
जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा २५ जनाको मृत्यु ! मृत आत्माले शान्ति पाओस…
एजेन्सी । भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातमा विवाहको भोजमा जान लागेका व्यक्तिहरु बोकेको एक ट्रक मङ्गलबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त हुदा कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गएको दुःखद समाचार छ । विवाह भोजमा सहभागी हुन लागेका व्यक्तिलाई लिएर गुडिरहेको ट्रक सडकबाट गहिरो खोँचमा खस्दा कम्तीमा पनि २५ व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । गुजरातको एक स्थानीय टेलिभिजन च्यानल न्युज–१८ ले उक्त जानकारी दिएको छ । गुजरात राज्यको भावनानगर क्षेत्रमा उक्त दुर्घटना भएको थियो । एकजना स्थानीय नागरिकको विवाहको भोजका लागि सहभागीहरु बोकेर सो ट्रक एक स्थानीय होटलतर्फ गइरहेको बताइएको छ । यस…
सडकछेउको नालीमा फालिएको सुटकेस खोलेर हेर्दा सबै जना आश्चर्य चकित
राजमार्गको छेउमा एउटा रातो रंगको सुटकेस फालिएको थियो । सुख्खा नालीमा सुटकेस फालिएको देखेपछि स्थानीयको उत्सुकता बढ्यो । साथमा उनीहरुलाई डर पनि लाग्यो । उनीहरुलाई प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरी आएर सुटकेस खोलेर हेर्दा त्यहाँभित्र एक महिलाको लाश भेटिएको छ । मृतक महिलाको शरीरमा चोटका निशानहरु छन् । भारतको दिल्ली जयपुर राजमार्ग अन्तर्गत हरियाणा पानीपतको रेवाडीमा सुटकेस भेटिएपछि प्रहरीले हत्याको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । सुटकेसबाट ती महिलाको पहिचान खुल्ने केही प्राप्त नभएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकाको हात र खुट्टामा चोट लागेको छ । ती चोटमा…
छट्पटिँदै बिरामी (पुरा पढ्नुहोस)
डोटी — दिपायलमा दलित समुदाय बसोबास गर्ने पिपल्ला बस्तीमा मंगलबार दिउँसो महिलाको होहल्ला सुरु भयो । कोही कानेखुसी गर्न थाले, कोही अत्तालिन थाले । अप्ठेरो महसुस गरेपछि गर्भवती सरस्वती नेपाली भिडियो एक्सरेका लागि बिहानै अस्पताल गएकी थिइन् । तर, एक्सरे जाँच नगरी रित्तै फर्केर आइन् । ‘बच्चाले चलमल नगरेको दुई दिन भयो, केही तलमाथि भयो कि भनेर बुझ्न गएकी थिएँ,’ आँसु चुहाउँदै उनले उपचार नपाएको दु:खेसो पोख्दै भनिन्, ‘बच्चा मरे, बाँचेको भनिदिने भगवान् जस्ता डाक्टरहरू नभएपछि रुँदै फर्केर आएँ ।’ ३ वटा गर्भ तुहिएर चौथोपटक बसेको गर्भ पनि खेर जाने हो कि भनेर पिपल्ला बस्तीका…